Uyivala njani iAkhawunti ye-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayivala njani iakhawunti ye-instagram?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 315
Ukujonga inyani yokuba I-Instagram yenye yezona ndawo zibaluleke kakhulu kwezonxibelelwano kwihlabathi lezobuchwepheshe, eye yaba yinxalenye yobomi bemihla ngemihla babantu abaninzi kunye nenxalenye esisiseko yobomi babo, ukuya kwinqanaba lokuchaphazela iindlela zokucinga nokwenza kwabasebenzisi babo. Injalo ke impembelelo yayo yokuba inokuba nolwazi olunokuchaphazela ubomi babasebenzisi ngokulungileyo nokungalunganga.
Ngenxa yenani labantu i-Instagram enofikelelo kuyo, kubandakanya iingcinga zabo, ubudlelwane kunye neemvakalelo, ichanekile loo nto eli qonga liye laba lelinye icala lobomi, apho wonke umntu azama ukungena kulo kwaye abe yinxalenye yalo. Nangona kunjalo, oku kumaxesha amaninzi kunokuba nzima, kuyadinisa kwaye kuyadanisa kwabaninzi, ke ukhetho olufanelekileyo lokubaleka kukususa iakhawunti.
Injalo imeko, ukuba isigqibo soku vala iakhawunti yakho ye-instagram okwethutyana Kungenziwa ngale ndlela ilandelayo, ukungena kwiwebhu:
Okokuqala konke kufanelekile icandelo lokuqala njengesiqhelo eqongeni.
Xa ulapho, kuya kufuneka ucofe iqhosha le ifoto yeprofayile ebekwe phezulu eqongeni.
Ngale nto, iprofayili iya kuvulwa apho kuya kufuneka ucinezele "Hlela ", Oku kufunyenwe, ecaleni kwegama lomsebenzisi lomntu.
Xa sele ukulungele, kuya kufuneka ukhangele kwaye ukhethe "khubaza".
Kwangelo xesha, cofa apha "Khubaza iakhawunti yam okwethutyana."
Ngaloo nto, Inketho apho iakhawunti ivaliwe kufuneka ichazwe.
Nje ukuba kwenziwe oku, kuya kufuneka unikeze iphasiwedi.
Ngale nto, iakhawunti iya kukhubazeka kwaye ngenxa yoko iprofayili, imifanekiso, ukuthanda kunye nezimvo izakuhlala ifihliwe, ide ibe yenziwe kwakhona.
Inyathelo nenyathelo ukusuka kwiselfowuni
Ukuba isigqibo sigqibile, yintoni ekufuneka yenziwe ukususa iakhawunti ye-Instagram kwifowuni ephathekayo, inkqubo iyafana, ukukhubaza nje amanyathelo ambalwa ahlukileyo. Kuyo nayiphi na imeko, izikhombisi ekufuneka zilandelwe zezi zilandelayo:
Isicelo se-instagram kufuneka sifakwe kwiselfowuni, ukuba ayikhutshelwa kwifowuni, kufuneka instalar kwivenkile yeapp.
Ngaloo nto, kufuneka ngena usetyenziso kwiselula.
Kwangelo xesha kufuneka ucinezele Cofa kumfanekiso weprofayile.
Emva koko kuya kufuneka ukhangele phakathi kokukhetha msgstr "ukumisela".
Emva koko, kuya kufuneka ukhethe Cima umphelo iakhawunti yam.
Okulandelayo, kuya kufuneka usilayishe isikrini Khetha ukhetho lokucima iakhawunti Unaphakade.
Emva koko, kuya kufuneka ukhethe phakathi kokukhetha okuvela kwiscreen, ukuze ucofe kamva "ucime iakhawunti kunye nolwazi." Emva koko cofa ku "qhubeka".
Ukugqiba, kuya kufuneka ufake iphasiwedi kwaye ucinezele iqhosha kwakhona msgstr "qhubeka".
Yenziwe, ngayo ulwazi lucinyiwe umphelo.
1 Khubaza i-instagram
1.1 Inyathelo nenyathelo ukusuka kwiselfowuni
2 Inkqubo ngqo
Utshintsha njani igama lomsebenzisi kwiTikTok?
Ungayivala njani i-Facebook okwethutyana?